Arakan Times – Page 4
November 26, 2017	Leaveacomment 435 Views
November 25, 2017	Leaveacomment 409 Views
November 24, 2017	Leaveacomment 336 Views
November 24, 2017	Leaveacomment 307 Views
November 24, 2017	Leaveacomment 643 Views
AT Burmese ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်တွင် ရိုခံဂျာနေအိမ် မီးရှို့ခံရ
November 24, 2017	Leaveacomment 181 Views
၂၄.၁၁.၂၀၁၇ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တပ်မင်းချောင်းကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ ည ၁၁:၃၀ နာရီချိန်တွင် ရိုဟင်ဂျာ နေအိမ်၂ လုံး ရခိုင်အစွန်းရောက်အုပ်စုတစ်စုက မီးရှို့လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ စစ်တပ်ဟာ ရခိုင်အစွန်းရောက်များကို အသုံးချပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ အကြမ်းဖက်၊ မီးရှို့မှုများကို ယနေ့ချိန်ထိ ဆက်လက်လုပ်နေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒုက္ခသည် ပြန်ခေါ်ရေး အမြန်လုပ်ဆောင်ပါ့မည်ဟု ပြောဆိုနေစဉ်တချိန်တည်းမှာ ရိုဟင်ဂျာပိုင်နေအိမ်များကို ဆက်လက်မီးရှို့နေကြပြီး ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ရင်း မပြန်ရဲအောင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်။
82 persons AIDS affected in Rohingya refugee camp
November 22, 2017	Leaveacomment 373 Views
November 22, 2017 AT Online Report At least eighty two Rohingya refugees have been identified AIDS affected by health department in all the camps in Ukhiya and Teknaf of Cox’s Bazar. Mostly are women among the AIDS affected persons. They are all being given treatment in Cox’s Bazar Sadar Hospital for the time being, the Civil Surgeon Abdus Salam has ...
MoU to be signed with Bangladesh: Suu Kyi
November 21, 2017	Leaveacomment 392 Views
November 21, 2017 AT Staff Report A Memorandum of Understanding (MoU) will be signed with Bangladesh within the current week to ensure the voluntary repatriation in safety of Rohingyas who have fled to Bangladesh after 25 August due to barbarous atrocities of Myanmar security forces, Suu Kyi hope. Suu Kyi said it to the journalists at the end of ASEM ...
AT Burmese ထင်းရှာသွားသော ရိုဟင်ဂျာ လူငယ် ၃ ဦး အသတ်ခံရ
November 20, 2017	Leaveacomment 1,018 Views
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ မြို့မကညင်တန်း ကျေးရွာနေ လူငယ် ၃ ဦးသည် ၁၄/၁၁/၁၇ တွင် မြို့သူကြီးကျေးရွာသို့ ထင်းရှာသွား သွားခဲ့ရာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ ကျောင်းသား များ၏ အလောင်းကို ပင်လယ်ကမ်းခြေ တခုတွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်သား၊ နယ်ခြားစောင့်၊ ရခိုင်အစွန်းရောက်များ၊ ကြီးစိုးရာ ထိုအရပ်ဒေသတွင် ယခုလို ရိုဟင်ဂျာ လူငယ်များ အသတ်ခံရမှုဟာ သူတို့လက်ချက်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင်းရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက နေ့စဉ်ဆိုသလို ရိုဟင်ဂျာ အရေးနဲ့ပတ်သပ်ပြီး ကန့်ကွက် ၊ ရှုံ့ချမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြသော်လည်း မည်သည့် ထူးခြား ပြောင်းလဲမှုများမရှိဘဲ ယနေ့အထိ ရိုဟင်ဂျာများ သတ်ဖြတ်ခံ၊ အကြမ်းဖက်ခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။